အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ - အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာ (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2008 Apr;11(2):162-8. doi: 10.1089/cpb.2007.0054.
Kraus SW, စယ် B ကို.
စိတ်ပညာဌာန, Castleton ပြည်နယ်ကောလိပ်, Castleton, ဗားမောင့် 05735, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Tသူကလက်ရှိလေ့လာမှုက X-rated ရုပ်ရှင်များ, အိမ်တွင်အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်, ပါဝင်သူ၏ကျားမပါးစပ်လိင်များအတွက်ပထမဦးဆုံးစတင်များ၏အသက်အရွယ်အကြားကွဲပြားလိမ့်မယ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးစတင်များ၏အသက်အရွယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်အရေအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်။
အတူ 437 ပါဝင်သူတစ်ဦးအွန်လိုင်းနမူနာ 29.46 ပျမ်းမျှအသက်ပါဝင်ခဲ့ လေ့လာမှုမှာ။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူအစောပိုင်းအကဲဖြတ်ကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုပြီးစီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူနှင့်အင်တာနက်နဲ့ X-rated ပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်း။
12 မှ 17 များ၏အသက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်နှင့်အတူယောက်ျားရှာဖွေတွေ့ရှိရလဒ်များအင်တာနက်မပါဘဲအမျိုးသားများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပထမဦးဆုံးပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဘို့သိသိသာသာငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက် access ကိုအတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသင်တန်းသားများအတွက်, 12 ဖို့အသက်အရွယ် 17 အကြားပထမဦးဆုံးအဘို့အငယ်အသက်အရွယ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်တာနက်မလိုဘဲသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ဆက်ဆံမှု။ လေ့လာမှုန့်အသတ်နှင့်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် Kraus နှင့်စယ် (2008) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုများနှင့်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အသက်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. သုတေသနအပေါ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အင်တာနက်သူသင်တန်းသားများကို (N ကို = 437) အင်တာနက်မလိုပဲများထက်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံသိသိသာသာငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်အစီရင်ခံ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသို့သော်လည်းအဘယ်သူမျှမအရေးပါမှုရှိ၏။ အဆိုပါစာရေးဆရာ (စ။ 166) "အကဲဆတ်သောပစ္စည်းကိုမကြာခဏအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်လိင်ရောင်းချရသောအင်တာနက်ကို, ပထမဦးဆုံးပါးစပ်လိင်နှင့်ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံဘို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အသက်အရွယ်တစ်ခု Accelerator အဖြစ်သရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါ" အဲဒီငြင်းခုန်။